यौनकाण्डले कृषी विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय बद्नाम, उजुरीको चाङपछि गुप्तचरको छानबीन ! | Diyopost
यौनकाण्डले कृषी विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय बद्नाम, उजुरीको चाङपछि गुप्तचरको छानबीन !
काठमाडौं, २३ चैत्र । कृषी विकास बैंकका उच्च अधिकारीले कार्यालय भित्रै यौन काण्ड मच्चाएको खुलाशा भएको छ । केही उच्च अधिकारीले कार्यालय भित्रै कर्मचारीमाथि श्रृङ्खलाबद्ध यौन दुर्व्यबहारको घटना घटाएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गोप्य रुपमा अनुसन्धान थालेको पाइएको छ ।
ती महिलाले जाहेरीसमेत ठीक पारेर प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि बैंकका उच्च तहका व्यक्तिले लेनदेनका आधारमा उक्त मुद्दा मिलाएका हुन् । यद्धपी उनीमाथि छानबीन भने टुंगिएको छैन । कृषी विकास बैंकमा यतिबेला विभिन्न भेषमा अनुसन्धानका कर्मचारी खटिन थालेका छन् । यौन दुर्व्यबहारका घटना अत्याधिक आउन थालेपछि अनुसन्धानका कर्मचारीले अनुन्धान थालेका हुन् ।